Muchikamu che "Nhau Yekubudirira", iyo Internet portal yemagazini ye "Potato System" inowanzoburitsa zvinhu nezve mabhizinesi ane zviitiko zvine chekuita nekurima mbatatisi. Asi nhasi isu tinoda kuwedzera chiyero uye kutaura nezve epasi rose agrarian Internet chirongwa chakagadzirwa nekubatanidzwa kwekuyedza kwemakambani kubva kuKyrgyzstan neTajikistan.
Zvichava pamusoro Agro Space IT chikuva.
Iri ibasa rekubatana remakambani AgroInformAsia (Kyrgyzstan), Neksigol Navovar (Tajikistan) uye nesangano reruzhinji Neksigol Mushovir (Tajikistan).
AgroInformAsia ikambani ine ruzivo uye inobvunzurudza inonyanya kugadzirisa maturusi eIT ekuvandudza kudyidzana kweB2B, ichipa ruzivo rwekuita sarudzo zvakanaka, manejimendi ruzivo uye kubvunza kure.
Nexigol Navovar ikambani inoshanda mukuvandudza maturusi eIT ezvekurima uye nezvimwe zvikamu zvehupfumi.
Nexigol Mushovir isangano rezano rekurima iro gore rega rinobatsira akawanda emabhizinesi madiki epakati nepakati uye ezviuru zvevarimi muTajikistan vanounza hunyanzvi hwekugadzira, kugadziridza uye kushambadzira zvigadzirwa zvekurima, kugadzirisa kunaka kwezvinhu uye kuwana purofiti kukura.
Iwo makambani akange aine ruzivo mukudyidzana: kubvira 2015, ivo vakabatana vakagadzira maturusi akasiyana eIT uye vakaasimudzira pakati pevashandisi vanobva kuKyrgyzstan neTajikistan.
Muna 2019, ivo vakagadzira iyo Agro Space IT chikuva.
Chikuva ichi chakaitirwa munhu wese anobatanidzwa mubhizimusi rekurima, kusanganisira hurumende, masangano esainzi uye ekutaurirana; mabhizimusi ekuvandudza zvekurima nekumaruwa.
Iyo chikuva inopa akasiyana IT maturusi, iko kushandiswa kwawo kunokutendera iwe kuti utore sarudzo dzinobudirira dzekutarisira bhizimusi rekurima (zvisinei nechero chikamu).
Iyo portal ine interface muChirungu, Kyrgyz, Russian uye Tajik.
Mugore rekuvhurwa kwayo, iyo Agro Space chikuva yakasaina memorandamu yekudyidzana neRussia Autonomous Non-Profit Organisation "Competence Center yeDigitalization yeAgro-Industrial Complex" (Tambov).
E-Agro Mepu imepu yemagetsi yemurimi inokutendera kuti uone miganho yeminda, ongorora mikana yekudyara zvirimwa makumi matatu nematatu, simbisa hukama nemakambani ekugadzirisa nekutengesa. Iyo purojekiti inobatsira kugadzirisa sarudzo dzakaitwa (inobatsira kudzikisa njodzi, kugadzirwa uye kutakura mutengo, nezvimwewo).
Iye zvino kuyedza kwevagadziri vepuratifomu kune chinangwa chekuvandudza maturusi anoratidzwa pane ino saiti uye kuvasimudzira padanho repasi rose Makambani mazhinji eruzhinji neakazvimirira ari kuratidza kufarira kubatana neAgro Space.
Iyo chikuva inopa mukana kune gumi neshanu mafoni ekushandisa ayo anobatsira kumisikidza zvinobudirira kugadzirwa kwezvakasiyana zvigadzirwa zvekurima; kune elektroniki tsamba yekuzivisa; kune raibhurari yemagetsi, inogara ichivandudzwa new kudzidziswa uye ruzivo rwezvinhu.
Vashanyi vePortal vanogona kushandisa mepu dzemagetsi neruzivo nezve kugadzirwa kwezvirimwa makumi mashanu + zvenguva ya50-2012 padanho redunhu; anodzidzisa uye ane ruzivo mavhidhiyo.
Chikuva ichi chinopa ruzivo rwechizvino-zvino pamusoro pemitengo yemisika yekutengesa yezvigadzirwa zvekurima muTajikistan neKyrgyzstan; macalculator epamhepo akavhurwa ayo anotendera iwe kuti uverenge huwandu hwembeu, mafetiraiza nemvura kana uchirima mhando dzinoverengeka dzemiriwo.
Pakazosvika Gumiguru 2020, vangangoita miriyoni vashandisi vanobva munyika makumi mana + vakashandisa kugona kwepuratifomu. Zvichida iyi sosi https://agro-asia.com/ru ichabatsira iwewo?